एमाले–माओवादीबीच भनाभन, बैठकमा झण्डै…::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
एमाले–माओवादीबीच भनाभन, बैठकमा झण्डै…
काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा सत्ता सांझेदार दल नै विभाजित भएका छन् ।
सदनमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले नै सरकारमाथि प्रश्न तेर्स्याएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रस आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
माओवादी सांसद एवं प्रवक्ता पम्फा भुसालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षामा भारतीय सेना आएकोप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले मोदीलाई सरकारले सुरक्षा दिन असक्षम भन्ने आरोपसमेत लगाइन् ।
‘कुनै राष्ट्र प्रमुखलाई हामीले हाम्रो देश भ्रमणमा बोलाउँदा हामीसुरक्षा दिन सक्षम छौं। तर मोदीको सुरक्षामा तीन सय जति संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मी ल्याउने काम भयो’, भुसालको भनाई थियो, ‘हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गर्न खोजिएको हो कि ? नेपाली सेनाको भूमिकालाई न्यूनिकरण गरिएको हो । हाम्रै देशका मन्त्रीहरु जान नसक्ने सुरक्षा व्यवस्थाको अहिले जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।’
उनले आफनै पार्टी सहभागी रहेको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरिन् । परराष्ट्र मन्त्रालय चुकेको बताउँदै भारतबाट घोषणा हुने र भारतीय मिडियाले प्रसारण गर्ने कुरा कार्यन्वयन हुने गरेको आरोप लगाइन् ।